Izisekelo eziyisisekelo zobuchopho: ubuchopho besilisa buguqula iminyaka yobudala 25 | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Ama-Brain Basics Ubuchopho obusha
Isikhathi sobusha siqala eminyakeni eyishumi kuya kwengu-10 ngokuqala kokuthomba futhi siqhubeke kuze kube yiminyaka engama-12. Kuyasiza ukuqonda ukuthi ubuchopho bentsha buhlukile ngokomzimba, ngokwakheka nangokwakheka kobobuntwana noma okomuntu omdala. Uhlelo lokukhwelana luqhuma lube semqondweni wethu ngokufika kwamahomoni ocansi lapho usuthomba. Yilapho-ke lapho ukunakwa kwengane kuguquka kusuka kunodoli nasezimotweni ezigijimayo kuya kokuhamba phambili kwemvelo, ukukhiqiza kabusha. Ngakho-ke kuqala ilukuluku lokuthomba lokuthomba ngocansi nokuthi ungaluthola kanjani ulwazi ngalo.
Inkulumo elandelayo ye-TED (amaminithi angu-14) yocwaningo lokuzizwa kwengqondo uProfesa Sarah Jayne Blakemore obizwa ngokuthi ukusebenza okuyisimangaliso kwengqondo yobudala, uchaza ukuthuthukiswa kobuchopho obuseminyakeni yobudala. Kodwa akhulumi ngobulili, izithombe zobulili ezingcolile ziyasebenzisa noma imiphumela yayo. Izindaba ezinhle ukuthi lokhu kuhle kakhulu isethulo (Ama-50 amaminithi) akwenzayo. Kungumprofesa we-neuroscience ku-National Institute of Drugs e-US futhi uchaza ukuthi isisindo esinobuthi njengotshwala noma izidakamizwa nezinqubo ezifana nokudlala, izithombe zobulili ezingcolile kanye nokugembula kungadambisa ubuchopho bentsha.
Lokhu kuhle kakhulu podcast (Ama-56 amaminithi) ngu-Gary Wilson ukhuluma ngokuqondile nokuthi izithombe zobulili ezingcolile ze-internet zibeka kanjani ubuchopho obusha. Uchaza umehluko phakathi kokushaya indlwabu nokusetshenziswa kocansi.
Intsha iyinkathi yokufunda ngokushesha. Kuyinto lapho siqala ukuqala ukuthola okuhlangenwe nakho okusha namakhono esiwadingayo ukuze sibe abantu abadala ngokulungiselela ukushiya isidleke. Umqondo ngamunye uhlukile, wadalwa futhi uhlotshaniswa nokufunda kwawo.
Ukufunda okusheshayo kwenzeke njengoba ubuchopho buhlanganisa uhlelo lokuvuza ngokuxhumanisa izifunda zomzimba zihlala ezinkumbulweni zethu nemicabango yethu kakhulu kwi-prefrontal cortex, indawo enesibopho sokuzithiba, ukucabanga okucabangelayo, ukucabanga nokuhlela isikhathi eside. Ibuye ijubane ukuxhumana phakathi kwalezi zingxenye ezihlukene ngokugqoka imigwaqo ye-neural esetshenzisiwe kunazo zonke ngegama elimhlophe elibizwa ngokuthi i-myelin.
Ngemuva kwesikhathi sokuhlanganiswa nokuhlelwa kabusha, ubuchopho besilisa buyiphonsa emuva ama-neurons angasetshenzisiwe kanye nokuxhumana okungenzeka kungashiya izindlela eziqinile ezihlanganiswe nakho okuphindaphindiwe nomkhuba. Ngakho-ke noma ngabe izingane zakho ezisencane zichitha isikhathi esiningi zodwa kwi-intanethi, noma zixubana nabanye abantu abasha, ukufunda, ukufunda umculo noma ukudlala imidlalo, izindlela ezizisebenzisa kakhulu ziyoba nemigwaqo emikhulu esheshayo ngesikhathi bebadala.
Kusencane, isifiso sokuthakazelisa sisezingeni eliphezulu. Ubuchopho bentsha bukhiqiza i-dopamine engaphezulu futhi bayakukhathalela kakhulu, bewashayela ukuhlola imivuzo emisha bese bethatha izingozi. I-dopamine eyengeziwe isiza ukuhlanganisa nokuqinisa lezo zindlela ezintsha.
Ngokwesibonelo, banokubekezelelana okungaphezu kwe-gory, okwesabisayo, okunezinyathelo ezenziwe, amafilimu e-horror ayoba nabantu abaningi abadala abagijima ukuyofihla. Abakwazi ukuthola okwanele kubo. Ukuthatha ingozi kuyinxenye engokwemvelo yentuthuko yabo, njengemingcele yokuhlola, igunya eliyinselele, ukufakazela ukuthi iyini. Yilokho okukhulunywa ngakho kwentsha. Bayazi ukuthi ukuphuza, ukuphuza izidakamizwa, ukulala ngokobulili okungavimbelwe nokulwa kungase kube yingozi, kodwa umvuzo wokuthakazelisa 'manje' unamandla kunokukhathazeka ngemiphumela yamuva.
Inselelo lapha wonke umuntu osebenzisana nentsha yanamuhla ukuthi ingqondo yengane isengozini enkulu yokugula kwengqondo kuhlanganise nokulutha, ikakhulukazi izidakamizwa ze-intanethi. Ukuba nomlutha owodwa kungadala ukucinga kwezinye izinto nezinto ezigcina i-dopamine ekhulayo. Ngakho-ke izidakamizwa eziphambene nezidakamizwa zijwayele kakhulu-i-nicotine, utshwala, izidakamizwa, i-caffeine, izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi, ukugembula nokugembula, isibonelo, konke ukucindezela uhlelo nokukhiqiza imiphumela engapheli yesikhathi eside sempilo yengqondo nengokwenyama.
Ukuphilela Okwamanje - Delay Discounting
Kungani kunjalo? Ngoba ama-lobes angaphambili asebenza 'njengamabhuleki' ekuziphatheni okuyingozi awakakhuli futhi ikusasa likude kakhulu. Lokhu kwaziwa njengokuncishiswa kokulibaziseka - ukhetha ukuzanelisa ngokushesha kunomvuzo ngokuzayo, noma ngabe lowo owedlule ungcono. Ucwaningo lwakamuva olubalulekile lukhombisile ukuthi izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi zizisebenzisela ukukhiqiza amazinga aphezulu we ukuphuza ukuphumula. Lokhu kufanele kube ukukhathazeka kwangempela kubazali nothisha. Nasi okuwusizo esihlokweni kule ndaba ekhuluma ngokucwaninga okusha. Isihloko esiphelele siyatholakala lapha. Ngamafuphi, abasebenzisi be-porn abayeka ukusebenzisa i-porn ngisho namasonto ama-3 kuphela bathola ukuthi bakwazi kangcono ukubambezela ukuzithokozisa kunalezo zifundo ezazingazange. Ukukwazi ukubambezela ukuzithokozisa kuyikhono eliyinhloko lokuphila elenziwa buthaka ukusetshenziswa kocansi futhi lingahle lilandise ngemiphumela yokuhlolwa empofu, ukukhiqiza okuphansi kanye nobuthakathaka obujwayelekile obutholwa abasebenzisi abaningi be-porn. Izindaba ezimnandi ukuthi lokhu kubonakala kubuyela emuva ngokuhamba kwesikhathi lapho abasebenzisi beyeka izithombe zobulili ezingcolile. Bona lapha ngezibonelo zokuzibika kwakho izindaba zokutakula.
Lapho siba ngabantu abadala, nakuba ubuchopho buqhubeka nokufunda, akwenzi lokho ngezinga elisheshayo elinjalo. Yingakho lokho esikhetha ukukufunda ebusheni bethu kubaluleke kakhulu empilweni yethu yesikhathi esizayo. Iwindi lithuba lokufundela okujulile lincipha ngemva kwalesi sikhathi esikhethekile sokukhula.
I-Brain Enempilo i-Brain Integrated
Ingqondo enempilo ingubuchopho obuhlanganisiwe, obukwazi ukulinganisa imiphumela nokwenza izinqumo ngokusekelwe ngenhloso. Kungabeka umgomo futhi uwufinyelele. Inamandla okucindezeleka. Kungaba nemikhuba engafundile engasayisebenzisi eyodwa. Yakha futhi ikwazi ukufunda amakhono amasha nemikhuba emisha. Uma sisebenzela ukuthuthukisa ubuchopho obuhlanganisiwe obuphilile, sandisa futhi sakha umbono wethu, siphumelela, sibona okwenzekayo esiseduze nathi futhi sibhekene nezidingo zabanye. Siyajabula, sijabulele ukuphila futhi sifinyelele amandla ethu eqiniso.
<< Uhlelo Lomvuzo